घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू डच फुटबल खेलाडीहरू Quincy Promes बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
LB उपनामको साथ परिचित एक फुटबल स्टार को पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ।मनी वुल्फ“। हाम्रो Quincy Promes बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ।
LifeBogger द्वारा प्रस्तुत Quincy Promes को जीवन र उदय। छवि क्रेडिट- इन्स्टाग्राम र twitter
यस प्रवाहमा उसको प्रारम्भिक जीवन / पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा / क्यारियर निर्माण, प्रारम्भिक क्यारियर जीवन, प्रख्यातताको बाटो, प्रख्यात कथामा वृद्धि, सम्बन्ध जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक तथ्यहरू, जीवनशैली र उहाँबारे अन्य थोरै ज्ञात तथ्यहरू सामेल छन्।
हो, सबैलाई थाहा छ गति र स्कोरिंग गोलहरूको लागि आँखाको साथ सर्वोच्च प्रतिभाशाली छ। यद्यपि, केवल एक हात फुटबल प्रशंसकहरू हाम्रो Quincy Promes जीवनी विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Quincy Promes Dembele बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
क्विन्सी एन्टोन प्रोमेस मा जन्म भएको थियो नेदरल्याण्ड्सको एम्स्टर्डम शहरमा उनको आमा (घरधनी) र बुबा (एक पूर्व फुटबलर) लाई जनवरी 4th दिन 1992। उहाँ संसारमा आउनुभयो दुई मध्ये एक छोरा उसको सुरीनामीस प्यारामा जन्मेका छन् जसलाई चित्रित गरिएको छ।
Quincy Promes अभिभावकहरूसँग भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट- इन्स्टाग्राम
यद्यपि नेदरल्याण्ड्समा जन्मिए पनि क्विन्सी प्रोमेसको परिवार दक्षिण अमेरिकाको देश सुरीनाम र नेदरल्याण्ड्सको भूतपूर्व उपनिवेश हो। नोट: यो देश हो - निम्न फुटबलरहरू; क्लेरेन्स सीडोर्फ, एडगर डेभिड र जिमी फ्लोयड हेसलबैंक बाट आएको।
Quincy Promes परिवार मूल: उनका बुबाआमा धेरै सुरिनाम परिवारहरु बाहेक दक्षिण अमेरिकी देशको कडा आर्थिक स्थितिका कारण नेदरल्याण्ड्सको शुरुवाती 1990 मा बसाई सरेका परिवारमा थिए। नोट गर्न पनि, tउनी सुरीनामका मानिसहरुका परिवारको जरा उप-सहारा अफ्रीकाबाट छ र उनीहरुका धेरै पश्चिमी अफ्रिकी वंशको साथ छन्। तलको नक्शामा हेर्नुहोस् जुन Quincy Promes पारिवारिक जराको व्याख्या गर्न मद्दत गर्दछ।
Quincy Promes पारिवारिक जड़हरू समझाईयो। छवि क्रेडिट- ULC
प्रारम्भिक वर्ष: क्विन्सिली प्रोम्स आफ्नो भाइसँगै हुर्केका थिए जसको बारेमा नेदरल्याण्डको एम्स्टर्डममा थोरै मात्र चिनिन्छ। ऊ धनी परिवार पृष्ठभूमिबाट आएको थिएन। वास्तवमा, उनका आमाबुबा शहरका अन्य आप्रवासीहरूजस्तै थिए जसले साधारण कामहरू गरे र एक राम्रो सेतो कलर कामको लागि उत्तम शिक्षा कहिल्यै थिएन। सानो छँदादेखि, प्रोमेस खेलौनाहरूको नयाँ संग्रहमा रुचि थिएनन् उपहारका रूपमा उसका अभिभावक, केवल एक फुटबल जुन उनीसँग सन्तुष्ट थिए।
क्विन्सी प्रोमेसले बल हिड्न थाले जब उसले हिंड्न सक्ने क्षणबाट नै खेल्यो। छवि क्रेडिट- twitter
Quincy Promes Dembele बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
अनुसन्धानका अनुसार फुटबल शिक्षा हासिल गर्न सब भन्दा राम्रो उमेर6बाट 10 हो। प्रोमेसको लागि, यो हिंड्न सक्ने क्षणदेखि नै सुरु भयो, बुबाबाट सबै धन्यवाद, जसले आफ्नो छोराको माध्यमबाट फुटबलको सपनाहरू जीवितै राख्न प्रयास गरे। प्रोमेज बुबा जो नेदरल्याण्ड जानु अघि सुरिनाममा पूर्व शौकिया फुटबलर थिए। बुबाको लागि फुटबल प्रेम गर्ने व्यक्तिसँग, प्रोमेसको लागि सुन्दर खेलको प्रेममा पर्न सजिलो थियो।
Qunicy Promes आमा उनको फुटबल संग ठीक थिएन: आफ्नो बुबाको फुटबल सपनाहरू जीवितै राख्नको लागि, प्रोम्स चाँडै नै आफ्नो बुबासँग सहमत भए कि उनी एक फुटबलर हुन लागेका थिए। उहाँ एक समर्थक बन्न मिशनमा बढी जोसिला हुनुहुन्थ्यो, यस्तो कारबाही जसले उनलाई बिहान, दिउँसो र साँझ फुटबल खेल्थ्यो। यो विकास उनको आमाको साथ राम्रोसँग बढ्न सकेन जो उनको सानो प्रोमेससँग पर्याप्त अध्ययन नगरेको बारेमा चिन्तित थिए, आफ्नो गृहकार्य र घरका कामहरू सम्झना नगरी यि ढिलो बाहिर बस्नुभयो। नतीजाको रूपमा, कहिलेकाँही प्रोमेसलाई आफ्नी आमाले ग्राउन्थे। उनीसँगै घर भित्र तालिम पाउँदा उसको महत्वाकांक्षालाई प्रो बन्नबाट रोक्दैन।
क्विन्सी प्रोमेसको शुरुआती वर्षहरू। छवि क्रेडिट- इन्स्टाग्राम
Quincy Promes Dembele बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
आफ्नो जीवनको बारेमा श doubts्का गर्ने आफ्नो आमासहित उनका परिवारका सदस्यहरूले आनन्द व्यक्त गरे जब प्रोमेजले एजेक्स ट्रायल पास गरे र उनी आफ्नो स्थानीय क्लबमा भर्ना भए। एकेडेमीमा हुँदा, प्रोमेस मूर्ति बनायो रोनाल्डिन्हो। यद्यपि उनका बुवा उनका सबै भन्दा महत्वपूर्ण रोल मोडेल हुन छोडे, एक जो उनीसँग शुरुआती वर्षहरू एजेक्ससँग उहाँसँगै थिए।
Quincy Promes फुटबलको साथ प्रारम्भिक जीवन। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
Quincy को रूपमा प्रोम्स परिपक्व हुन जारी रहे, उनले आफैंले एकेडेमीको साथ जीवनमा राम्रोसँग बसिरहेको देखे। उनी थिए बहिर्गमन किसिमको बच्चा - एक प्रकारको नेता जसले आफ्नो टोली मामिलाहरूको अध्यक्षता गर्थे। तल उनले बहादुर बच्चाको भिडियो प्रमाणको एक अंश दिएका छन् किनकि त्यसले एजेक्स टिभीसँग उसको नेतृत्वको कर्तव्यहरू प्रदर्शन गर्दछ।
Quincy Promes Dembele बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि कथा
जब गइरहेको कठिन भयो: जुन समयमा उनी एक्सएनयूएमएक्स वर्ष थिए क्विन्सी प्रोम्सले क्लबको व्यवस्थापनको साथ सबै प्रकारका समस्याहरूमा पर्न थाल्यो। Ajax उनको प्रदर्शन को आरोप लगाए खराब बानी, एक विकास कि उनको एकेडेमी स्नातक धम्की र क्लब मा रहनुहोस्। दुःखको कुरा, वर्ष 2008 (अझै पनि 16 पुरानो), एमेक्ससँग प्रोमेको सम्झौता समाप्त भयो र उसलाई क्लब छोड्ने भनियो जुनलाई "खराब व्यवहार" भनिएको थियो।
लगभग छोड्ने फुटबल: एजेक्सबाट अस्वीकृत हुनुमा यति धेरै पीडा भयो कि प्रोमेसले फुटबल छोड्ने सोचे। यो उसको आमा बुबा को प्रयास लाग्यो (विशेष गरी उसको आमा) उसलाई फुटबलमा जानको लागि मनाउने, जसले यो बुझ्छ कि- सबै भन्दा राम्रो शिक्षक असफल थियो। प्रोमेहरूले चाँडै यो गल्ती गर्न ठीक छ भनेर बुझे र यसले उसलाई राम्रो व्यक्ति बन्न ठूलो हुँदै गयो।
सार्दै: प्रोम्सलाई अर्को क्लब भेटियो- एचएफसी हार्लेम जहाँ उनले एक वर्ष खेल्यो क्लबको दिवालिया हुन अघि। दिवालिया हुनु भन्दा पहिले, उनले एफसी ट्वेन्टेसँग ट्रायलमा भाग लिएर भाग्न खोजे जसले उनलाई उनको एकेडेमीमा छिर्न अनुमति दिए।
एफसी ट्वेन्टे उनका लागि सही कदम साबित भए किनभने उनले एकेडेमी स्नातक र आरक्षित टीमलाई कलअप गरे। आफ्नो विगतबाट सिक्दै, प्रोमेसले पिचमा र बाहिर दुबै ठूलो परिपक्वता देखाउन शुरू गरे। उही मौसममा, उसको परिपक्व व्यवहारले उनलाई ज legend्ग एफसी ट्वेन्टेको डच पौराणिक कथा तथा प्रशिक्षक प्याट्रिक क्लाईवर्टको कप्तानबाट सम्मानित भएको देख्यो। उनले पछि डच क्लबको नाममा loanणमा प्रगति गरे।अगाडि ईगलहरू जानुहोस्'जहाँ उसले एरिक टेन हागलाई भेट्यो र उसको सर्वश्रेष्ठ खेलाडी भयो। कम प्रोम्सलाई थाहा थियो कि उनको वफादारीले एरिकलाई दस हग बनाउनेछ (भविष्य Ajax कोच) उसको सपनाको क्लब, अजाक्समा फिर्ता ल्याउने मानिस हुन सक्छ।
क्विन्सी प्रोमेस र एरिक टेन ह्यागले गो एहेड ईगल्समा एक सिजनका लागि सँगै काम गरे। छवि क्रेडिट- AdNl
ठूलो निर्णय: परिपक्वता चीजको बाबजुद पनि, प्रोमेस राम्ररी खेल्न, अझ राम्रा प्रस्तावहरू लिन र ठूला पैसाको लागि कुराकानी गर्न कटिबद्ध थिए। त्यो ठूलो सपना देख्दै, उनका टीमका साथीहरूले चुटकीहरू खेल्थे, उनलाई बोलाउँदै “मनी वुल्फ“। FC Twente का लागि 11 गोल र Xण-बाध्यका लागि अर्को 13 स्कोर गरेपछि अगाडि ईगल फुटबल क्लब जानुहोस्, प्रोमेसको योग्यताले यूरोपीयन क्लबहरूको मेजबानलाई आकर्षित गर्न थाल्यो।
Quincy Promes Dembele बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
राम्रा चीजहरू उहाँको बाटोमा आउन थाले। सबैभन्दा पहिला, प्रोमेसले डच राष्ट्रिय टोलीबाट कल पायो। दोस्रो, स्पार्टक मस्कोसँगको उसको वार्ताले ठूलो पैसा कमाउने ट्रिगर ग he्यो जस्तो कि उसले सँधै सपना देखेको थियो। धेरै व्यक्तिहरूले रोमेनियाको लागि प्रोमेको छनौटमाथि प्रश्न उठाए पैसा होईन: उसको लागि 1 कारक हो र फुटबल होईन। यसले उसलाई पुन: दावी गरेको देखे "मनी वुल्फ"।
रसियामा जीवन: प्रोमेहरू यति कम उमेरमा रसियाको लागि प्रस्थान गरे, जुन उनको आलोचकहरूलाई गलत प्रमाणित गर्ने दिमागमा आधारित थियो। रसियामा छँदा, उनले क्षेत्र प्रदर्शन अघि आफ्नो सम्पत्तीलाई बयान गरे। आफ्नो सम्पत्ति देखाउँदै, प्रोमेसले भिडियो बनायो जहाँ उनले महँगो लुगा प्रदर्शन गरे, उनले पैसाको साथ किनेका चीजहरू मिडियाको साथ मिलेर आफ्नो पेन्टहाउसमा लिफ्ट। यसले प्रशंसकहरूको दिमागमा शंका उत्पन्न गर्‍यो कि प्रोमेसले फुटबल खेलाडीको रूपमा जीवन सम्हाल्न सक्छ कि सक्दैन। उसको व्यवहारको बारेमा केहि विचार पछि उसलाई शिकार गर्न आएपछि, प्रोमेसले आफ्नो भिडियो बनाएर फर्केर सबै भिडियो मेटाउने निर्णय गरे।
प्रोमेसको रसियन क्यारियरको राम्रो शुरुआत थियो उनले धेरै गोलहरू उठाए र धेरै राम्रो सहयोगी दिए। बढ्दो परिपक्वताका साथ कुशल पासे विger्गर रूसी शीर्ष उडानमा सबैभन्दा प्रतिभाशाली खेलाडी भए किनकि उनले महिनाका धेरै लिग खेलाडीलाई जितेका थिए। आफ्ना आलोचकहरूलाई शान्त गर्दै, प्रोमेहरू लीगमा सर्वाधिक गोल स्कोरर भए। उनका गोलहरूले स्पार्टाक मस्कोलाई रूसी प्रिमियर लिग (2016-2017), रूसी सुपर कप (2017) र वर्षको एक2समय प्लेयर जित्न मद्दत पुर्‍यायो।
क्विन्सी प्रोमेस फेम कथामा- उनी रसियामा जित्ने सबै कुरा जित्थे। छवि क्रेडिट- twitter र इन्स्टाग्राम
चुस्त नहुनु भन्दा, फुटबल प्रतिभा शक्तिबाट अर्को बलियो हुँदै गयो, सारियो सेविला र पछि एजेक्स, जहाँ उसले आफ्नो बकाया फिर्ता गरेको छ। लेख्ने समयमा क्विन्सी प्रोमेहरू हालसालै बीचमा छन् देशको एक्सएनयूएमएक्स विश्वकप योग्यता विफलता पछि डच फुटबललाई पुनर्जीवित गर्ने आश्चर्यजनक फुटबलरहरूको अन्त उत्पादन लाइन। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
Quincy Promes Dembele बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
फुटबलमा उनको राइज टु फेम संग, यो निश्चित छ कि धेरै फुटबल प्रशंसकहरु, विशेष गरी महिला प्रशंसकहरु क्विन्सी प्रोम्सको प्रेमिका छ कि छैन वा उनी अविवाहित छ र अझै खोज्दै छ भन्ने कुरामा चिन्तित हुनुपर्दछ।
क्विन्सी प्रोमेस गर्लफ्रेंड को हो?… के ऊ अझै एक्लो र खोजी गर्दै छ? ... छवि क्रेडिट- इन्स्टाग्राम
क्विन्सी प्रोम्स सुन्दर देखिन्छ, परिपक्वता, आफ्नो क्यारियर सम्मान संग एक राम्रो प्रेमी र पति बनाउन छैन भन्ने तथ्यलाई इन्कार छैन (जुन वर्तमानमा लेखन को समय हो)। सफल फुटबलर पछाडि, एक आकर्षक पत्नी रहेको छ। प्रोम्सको विवाह उनकी श्रीमतीसँग भएको छ (तल चित्रमा) र उनीहरूसँग तीन बच्चाहरू छन्- दुई छोरी र एक केटा।
उनका तेस्रो बच्चा, नोआकिन, 8 मे 2017 मा जन्मिए, स्पार्टक मस्कोले लिग च्याम्पियनको रूपमा पुष्टि भएको केही समय पछि।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… क्विन्सी प्रोमेसकी श्रीमतीले स्पार्टक मस्को लीग च्याम्पियनको रूपमा पुष्टि भए पछि मे 8 को 2017th मा उनको पहिलो छोरा र तेस्रो बच्चा (Noaquin दिए प्रमेस) लाई जन्म दिए।
भर्खरैका उसको व्यवहार जस्तै, क्विन्सी प्रोम्सको विवाहलाई पनि हालको समयमा केही गडबडी भएको छ। एक पटक, प्रोमेसलाई सार्वजनिक आँखाको छानबिनमा ल्याइएको थियो जब उहाँ जून 2018 मा आफ्नी श्रीमतीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नुभयो। उ जमानत मा रिहा गरिएको थियो, जबकि अनुसन्धान जारी छ।
Quincy Promes Dembele बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
क्विन्सी प्रोमेस व्यक्तिगत जीवनलाई टाढाबाट चिन्नुले तपाईंलाई उसको व्यक्तित्वको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
पिच बन्द, प्रोमेस आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथीसँग समय बिताउँछन्- मेम्फिस डेप्ले। तपाईं दुई फरक देशहरूमा पनि खेल्नुहुन्छ (लेख्ने समयमा), जोडी प्रायः एक अर्कासँग दैनिक बोल्दछन्। अब, यी दुईमा के समानता छ? ... उत्तर छ संगीत र ट्याटूहरू.
क्विन्सी प्रोमेस व्यक्तिगत जीवनलाई टाढाबाट जान्ने। छवि क्रेडिट- दैनिकमेल र सूर्य
तपाईंलाई थाँहा थियो?… प्रोमेसले एक पटक अन्तर्राष्ट्रिय कम्तिमालीसँग एक नयाँ नयाँ र्याप एकल जारी गरे मेम्फिस डेप्ले। ठूला महँगो सुनको चेनहरू लगाएर, उनीहरूको र्प भिडियो जोडीसँगै सुरु भयो जोडी कारको माथि उनीहरूको गहना राख्नु भन्दा पहिले लक्जरी रोल रोइसमा हाँस्दै जोडी बनाउँदै थिए। मेम्फिस डिप्टी धेरै एनिमेटेड प्रोमेसले आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथीबाट लिन भन्दा पहिले रैप सुरु भयो। तल प्रमाणको एक टुक्रा छ- भिडियो.
क्विन्सी प्रोमेस व्यक्तिगत जीवनमा थप, उहाँसँग स्वाभाविक समानता छ रूस- संसारको सब भन्दा ठूलो देश जो उसलाई आफ्नो क्यारियर को राम्रो प्राप्त गर्न बनायो। हिउँदमा, प्रोमेसले हिउँको शीत कोटमा कभरिएका शहरहरू देखेका छन्, प्रत्येक दृश्यलाई विशेष र अद्वितीय बनाउँदछ। अन्य प्राकृतिक स्थानहरूमा उनले भ्रमण गरे, हिउँदको दृश्य (तल अवलोकन गरिए अनुसार) सकरात्मक रूपमा मोहनीय छ - ऊ रसियाको मायामा परेको अर्को कारण हो।
क्विन्सी प्रोमेस व्यक्तिगत जीवन फुटबल देखि टाढा तथ्य- रसिया संग उनको दृष्टिकोण र अनुभव। क्रेडिट- twitter
अन्तमा उनको व्यक्तिगत विश्वास हो कि रूसी फुटबल प्रशंसक जातिविद् छैनन्। क्विन्सी प्रोम्स परिवारले उनीहरूको सम्पूर्ण बसोबासमा रूसबाट उत्तम प्राप्त गरे, जब उनी स्पार्टक मस्कोका लागि खेले। काउन्टीमा जातिय भेदभाव स्वाभाविक छ भन्ने लोकप्रिय धारणाको बावजुद पनि यस फुटबलरले न त उनका माता-पिताले जातीय भेदभाव सामना गरे।
Quincy Promes Dembele बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली
Quincy Promes जीवनशैली तथ्या surely्क पक्कै पनि तपाईं आफ्नो कथित जीवन स्तर को एक पूरा तस्वीर प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ। Mफुटबलको माध्यमबाट धेरै पैसा कमाउने एउटा आकर्षक जीवनशैलीमा सजिलै सजिलै देख्न सकिन्छ जुन उसको चमकदार मर्सिडिज कारले तल चित्रण गर्दछ।
Quincy Promes LifeStyle- ऊ एक विदेशी कार चलाउँछ
जीवनशैलीमा पनि, व्यावहारिकता र रमाईलोको बीचमा निर्णय लिनु वर्तमानमा प्रोमेहरूको लागि गाह्रो विकल्प होईन। सधैं राम्रो देखिने फुटबलर पिचमा आफ्नो उत्कृष्टताको लागि मात्र होइन तर महँगो वाचहरू किन्न र आफ्नो समुद्री किनारमा सपनाहरू बाँच्न सक्ने क्षमताको लागि पनि प्रख्यात छ।
Quincy Promes LifeStyle- उनले आफ्नो पैसालाई के खर्च गर्छ भनेर सोधपुछ गर्छन्। छवि क्रेडिट- इन्स्टाग्राम
Quincy Promes Dembele बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
अरू बच्चाहरू जस्ता फुटबल खेलाडीहरूको विकासका लागि परिवारका सदस्यहरूको, विशेष गरी दुबै आमा बुबाको सहयोग आवश्यक हुन्छ, क्विन्सी प्रोमेज अभिभावकहरू उनको पक्षमा उभिएका छन् र उनीहरूलाई उनी आज कहाँ छन् भनेर पुग्न मद्दत गर्छन्।
लेखनको समयमा प्रोम्स उनकी पत्नी, उनीहरूका तीन बच्चाहरू, उसका आमा बुबा र भाइसँग एम्स्टर्डममा बस्छन्। डच समाजमा एकीकृत भएपछि, उनका परिवारका सदस्यहरू हाल आफ्नै आफ्नै भएको लाभांश पाउँदै छन् (रोटी बनाउने) एक सफल फुटबल क्यारियर को लागी, वित्तीय स्वतन्त्रताको लागि उसको परिवारको आफ्नै हिस्सा फोर्जिंग। Promes sees उसकी आमा उसको पाठीको हड्डी हो र एक जसले उसलाई सबैभन्दा बढी उत्प्रेरित गर्‍यो फुटबलमा फिर्ता जानको लागि जब उसलाई एजेक्सले हटायो।
क्विन्सी प्रोमेहरू आफ्नो बुवा भन्दा उनको आमाको नजिक भएको देखिन्छ। छवि क्रेडिट- इन्स्टाग्राम
Quincy Promes Dembele बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
बुस्टा राइम्सको साथ काँधमा रब्बिंग गर्दै: फुटबल र हामी "रैपिpping" भन्ने शब्दको बीचमा यो सहजीवन सम्बन्ध लामो समयदेखि अस्तित्वमा छ र क्विन्सी प्रोमेसले हालसालै आफ्नो खेललाई अगाडि बढाइरहेको छ। हिप-हप दृश्यमा बुस्ट गरेपछि, मनोरञ्जनमा उनको व्यक्तित्वले उनीलाई बुस्टा राइड्स जस्ता उद्योगका केही ग्रेटहरूसँग काँधमा मलहम गरेको छ।
क्विन्सी प्रोमेस रेपिंगको लागि प्रेमले उसलाई बुस्टा राइम्सको काँधमा काँध मलारहेको छ। छवि क्रेडिट- इन्स्टाग्राम
कुनै श doubt्का बिना, क्विन्सी प्रोमेहरू विगत र वर्तमानका सबैभन्दा ठूला रैपिंग फुटबलरहरूको बढ्दो सूचीको लागि प्रेरणा हुन्।
Quincy Promes 'Tattoos को AZ: उहाँसँग विश्वव्यापी सुपरस्टार भएर आउने सबै नगदको साथ, क्विन्सी प्रोमेस आफ्नो शरीरलाई ट्याटूमा फोहोर लिन हिचकिचाउँदैन। ऊ यति धेरै ट्याटूहरू - आफ्नो पछाडि ट्याटू छ 'इजिप्टियन फरोह“। उसको अगाडि छेउमा ट्याटू राइटअपहरू सबै प्रकारका हुन्छन् जुन उनको विगतको जीवन झल्काउँछ।
क्विन्सी प्रोमेस ट्याटू बुझ्दै - उहाँको पछाडि र अगाडि छेउमा। छवि क्रेडिट- twitter र इन्स्टाग्राम
उनका सबै क्विन्सी प्रोमेस ट्याटूहरूमा, सबैभन्दा ध्यान आकर्षण गर्ने शरीर कला भनेको त्यो हो जुन उनको शुरुवाती प्रतिनिधित्व गर्दछ, स्टाइलिश रूपमा लेखिएको 'QP' र उनको टाउको को पछाडि स्थित।
क्विन्सी प्रोमेस ट्याटू- उसको टाउको र हात स .्ग्रह। छवि क्रेडिट- twitter
अन्तिम Quincy Promes अनटोल्ड तथ्य- उसको ब्राजिलियन फुटबल लीजेन्डसँग एन्काउन्टर थियो, पेल- एक सानो बच्चाको रूपमा, क्विन्सी प्रोमेन्स अभिभावकहरूले उनको छोरालाई एजेक्समा पूर्ण नामांकन गराउन मद्दत गरे जसले उसलाई फुटबलको राजालाई भेट्ने अवसर दिए -पेल"।
क्विन्सी प्रोमेसको एक पटक पेलेसँग भेट भयो। छवि क्रेडिट- twitter
ब्राजिल लिजेन्डका साथ आमने सामने जानु अघि क्विन्सी प्रोमेसले आफूलाई अलि शंका गर्‍यो र इतिहासको अंश भएको कसैलाई के भन्ने वा सोध्ने सोच्दै। पेलेटलाई भेट्नु भनेको किताबबाट कसैलाई भेट्नु जस्तै हो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Quincy Promes बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।